Ekoatora: Fitsapam-pahaizana atao amin’ireo mpampianatra amin’ny sekolim-bahoaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Jona 2009 17:37 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 繁體中文, 简体中文, македонски, bahasa Indonesia, English
Isan'ny tanjona iray napetraky ny governemanta ankehitriny ny fanavaozana ny rafi-pampianarana eto Ekoatora, ary ankehitriny ho fanatanterahana izany dia manara-maso akaiky ny fahaiza-manaon'ireo mpampianatra amin'ny sekolim-bahoaka manerana ny firenena izy. Ny sampana mpanatanteraka dia vao avy nandàny lalàna vaovao iray(.pdf doc) mangataka ireo mpampianatra rehetra handalo fitsapam-pahaizana mandritry ny herinandron'ny faha 25 Mey. Na eo zaza izany, ny Fiombonam-bem-pirenen'ny mpampianatra [es] (UNE ho an'ny fanafohezana azy amin'ny teny Espaniôla) dia manohitra sy mihantsy mivantana ilay fanapahana amin'ny filazàna fa tsy mazava loatra ny maha-ara-dalàna na tsia ny fanaovana fitsapam-pahaizana toy izany. Ampahany kely dia kely raha ny isan-jaton'ireo mpampianatra mpikambana ao aminy no nandray anjara tamin'ilay fitsapam-pahaizana, ary dia mipoitra ankehitriny ny fanontaniana hoe fomba ahoana no hahazoana antoka fa hahazo ny fampianarana mendrika sy sahaza azy, avy amin'ireo mpanabe eto amin'ny firenena ireo kilonga.
Ireo mpampianatra mivondrona manao diabe fitakiana fisondrotan-karama teny an-dàlamben'i Machala, faritanin'i El Oro, Ekoatora. Famoahan-tsary nahazoana alàlana tamin'i http://www.diariocorreo.com.ec
Vondrona maro avy amin'ny Fiombonan'ny Mpampianatra no naneho ny hevitr'izy ireo momba ilay fitsapam-pahaizana. Ny UNE ao Carchi [es], ohatra, dia nanomboka hetsi-panoherana ho fanehoam-panohanana ireo sekoly nandà ny hanaovana fitsapam-pahaizana[es].
David Guamba avy amin'ny Ecuador Noticias [es] dia manazava ny antom-pisian'ilay fitsapam-pahaizana sy ny hoe nahoana ireo mpampianatra no matahotra:
Raha ny filàzan'ny Minisitra, Raul Vallejo, hànana endrika roa ny fitsapam-pahaizana: anatiny sy ivelany. Ny anatiny dia harafitry ny mpiara-miasa, ny mpanara-maso, ireo ankizy, ny raiamandreny, ary ny samy mpampianatra [fitsaran-tena](self-evaluation), ary ampidirina ao anatin'io ny fijerena mivantana ao an'efitrano fampianarana mandritry ny ora iray. Izany fitsapam-pahaizana rehetra izany dia hanome ny 50 isan-jaton'ny isa atolotra. Hisy koa ny fitsapam-pahaizana ivelany, izay idiran'ny fahalalàna manokana ka hanomezana ny 30 isan-jaton'ny isa, ny fanànana fahaizana mampianatra hahazoana ny 10 isan-jato, ary ny traik'efa amin'ny fampianarana hanome ny 10 isan-jaton'ny isa rehetra mitambatra.
Ireo mpampianatra mahazo isa 90 isan-jato no mihoatra (mendrika indrindra) dia hanan-jo hahazo fanampiana ara-bola na hanaraka fiofanana momba ny asany, ho lasa mpampianatra mpanofana aminà tetikasam-panabeazana izy ireny, ary hahazo famporisihana ara-bola manodidina ny 1,200 dolara isan-taona mandra-pisian'ny hetsika vaovao indray, izay mbola any aorian'ny efatra taona any.
Ireo mpampianatra tsy tafita tamin'ilay fitsapam-pahaizana voalohany kosa dia asaina manaraka fiofanana mandritry ny herintaona ka aorian'izay dia homena vintana izy ireny hamerina indray hitsapa fahaizana. Aorian'izay ihany, raha tsy afaka i ramose na i madama, vao roahana tsy ho mpanabe intsony.
Belem Proaño avy amin'ny Temas Para Debatir [es] dia manaiky fa ny fandàvana tsy hotsapàna fahaizana dia hampihen-danja ireo mpampianatra ary ilay fitsipahana dia raisina ho toy ny fandàvana fanavaozana, izay zavatra efa irosoan'ny firenena:
Zavatra saropady ny fanabeazana eo anivon'ny fiarahamonina satria iankinan'ny hoaviny. Raha mandà tsy hotsapaina fahaizana ireo mpampianatra, sahala amin'izay haneren'ny Fiombonamben'izy ireo azy, dia hanome sary ratsy eo anoloan'ireo mpiray tanindrazana amin'izy ireo. Isan'ny anton-dresaka iray tena voizina be eto amin'ny firenena io izao, saingy mbola betsaka ny zavatra mifanipanipaka.
Amiko manokana, heveriko fa ny tsy matihanina ihany no tokony hangovitra amin'ny fitsapam-pahaizana satria ny fitsapam-pahaizana tsy hoe famoretana tsy akory, fa fitaovana iray hahafantarana ny tena zava-misy eo amin'ny seha-panabeazana. Miaraka amin'ireny fepetra rehetra ireny, ho matotra kokoa ny fandaminan-draharaha ary tsy hahitàna hadisoana firy intsony.
Ny fitsipahana toy ity dia nitondra adihevitra manodidina ny anjara toerana raisin'ny Fiombonamben'ny mpampianatra sy ny fisiana na tsia fironana pôlitika manosika ilay Fiombonambe. Na dia ny mpitoraka blaogy ao amin'ny Ecuador Sin Censura [es] izay manohitra mivantana ny governemantan'i Filoha Rafael Correa aza, dia mihevitra fa rariny ny hijoroan'ity farany manoloana ny Fiombonamben'ny mpampianatra izay manana fifandraisana akaiky amin'ny antoko pôlitika Democratic People's Movement (MPD).
Ny Minisitry ny Fampianarana teo aloha Alfredo Vera Arrata dia manakiana ny MPD ao anatin'ny blaoginy satria vondron'olona 30 mpikambana ao amin'ny Democratic Popular Movement (MPD), izay milaza tena ho mpampianatra na dia tsy mbola nanitsaka akory ny tokonam-baravaran'ny efitrano fampianarana aza, no milalao ity raharaha ity ary izy ireo dia mandray karama. Vera dia iray amin'ireo mpankasitraka ny fanavaozana, miaraka amin'ny Minisitry ny Fampianarana ankehitriny Vallejo, izay ao ambadiky ny hetsika manohitra ny UNE. Ny Unitary Front of Education Workers (FUTE) izay nampangaina ho manao izay hampizarazara ny UNE izay tena lehibe tokoa [es]. Ity sampana vaovaon'ireo mpampianatra mivondrona ity dia ahitàna hatramin'ny 40 000 ny mpiakambana ao aminy ary mitoetra ho tsindrin'entan'ny UNE.
Raha mihamahazo vàhana hatrany ny fankasitrahana ny fanaovana fitsapam-pahaizana, mbola mahazo fanohanana manerana ny firenena ihany koa ireo mpampianatra. Ilay mpanao gazety Fernando Balseca ao amin'ny gazety El Universo dia milaza fa adinon'ny governemanta fa karama varymasaka no raisin'ireo mpampianatra ireo ary ny firenena dia tsy nanana mihitsy Ministeran'ny Fampianarana niainga avy any an-tsekoly izany. Amin'ny endrika fanesoana ihany koa no anamarihany fa ireo lohandohany mpitarika ny fitsipahana dia saiky avy aminà sekoly iray avokoa ary matetika koa dia mpianatr'ireo mpampianatra tandindonin'ny fandroahana amin'izao fotoana izao raha tsy manaiky ny hanao fitsapam-pahaizana.
Na izany aza, maro no manakiana ny Filoha Correa momba ny fitantanany ireo raharaha fitsipahana sy ny fitsapaham-pahaizana.Indray mandeha indray, ny mpitoraka blaogy ao amin'ny Ecuador Sin Censura [es] dia tsy mahita loatra ny antony iventesan'ny governemanta ny Artikla faha-38,andalana momba ny asan'ny mpampianatra ho fototra iorenan'ny fandroahana ireo mpampianatra mandà ny tsy hiatrika fitsapam-pahaizana. Milaza izy io fa ireo mpampianatra dia azo roahana rehefa voaporofo ny tsy fahaiza-manaony, nefa kosa ny fandàvana tsy hiatrika fitsapana dia tsy porofo mihitsy azo hanamarinana izany zavatra izany .
Farany, Julio C. Enriquez avy amin'ny Ultimatum [es] dia mihevitra fa manana ny tsy azony ihoarana i Correa sady miantso fifanatonana eo amin'ny roa tonta. Manontany izy hoe nahoana i Correa, raha handany andro hifampitàna amin'ireo mpitarika sy ny mpikambana ao amin'ny UNE ihany, maninona izy raha mampanao fihaonambem-pirenena sy manaiky mba hihaino ireo mpanabe sy ny hanoloran'izy ireo ny vivavinany hahafahan'izy ireo miara-miasa hikatsaka izay tsara indrindra ho an'ny fanabeazana Ekoatoriana:
Amin'ny fitrangan'ny raharaha amin'izao fotoana, nahoana i Correa no mbola miseho milay amin'ny pôlitikan'ny fampihorohoroana ireo mpampianatry ny UNE ihany? Tena tsorina, mandreraka be izany. Maninona no tsy miantso fihaonambem-pirenena amin'ireo mpampianatra ireo izy mba hanamafisana miaraka ilay fanamby hanovàna ireo lova mavesatra mitambaby amin'ny fanabeazam-pirenena nodian'ireo governemanta nifandimby tsy hita, indray mandeha tsy miverina? Maninona no tsy anontanian'i Correa ny UNE momba izay soso-kevitry ry zareo ho fanavaozana ny fanabeazana sy mba hampitahàna izany amin'ny fomba fijeriny manokana ny tontolon'ny fanabeazana, amin'izao fotoana maha-sangan'ny sarangam-piarahamonina misy azy izao – dia ny sarangan'ny bourgeois vao misondrotra izay hanjary ho saranga mitàna ny fahefana atsy ho atsy? Fa maninona no miditra amin'ity fomban'ny fifandirana ity?
Ireo mpitarika ny UNE dia mihevitra ny hankalàza ny National Council meeting amin'ny Alatsinainy 1 Jona mba hifanakalozana hevitra momba izay tetik'ady hiatrehana ny hoavy, ary efa miantso sahady diabem-pirenena izy ireo ny 11 Jona izao. Rafael Méndez dia mihevitra ny hanatrika ny fampihaonana hokarakarain'i Correa ao Guayaquil ny Zoma 29 Mey ho fanohanany ny tolo-keviny amin'ny fitsapana fahaizana. Méndez dia mino ny maha-zava-dehibe ny tokony hanohanana ny Filoha Correa ary mitantara ny antony mbola nandraisan'ireo mpampianatra 12000 (mpikambana ao amin'ny UNE) karama ihany na dia tsy niasa aza izy ireo. Ho izy manampy:
Araka izany, ry zareo (mpampianatra) dia tsy manana ny fahefana ara-moraly hampamerina kilasy ireo mpianany izay tsy manaiky hiatrika ny fanadinana (azy ireo) any an-tsekoly.